MUQDISHO, Somalia - Taliska Mareykanka ee qaarada Afrika [AFRICOM], kaasoo kormeera howlgalada milatari ee qaarada, ayaa mar kale bilaabi doona baahinta waxyeelada weerarada circa ah loogu geysto kooxda Al-Shabaab.
Go’aankaan ayaa kusoo beegmaya iyada oo uu talisku mar sii horeysay ka dhawaajiyay inay gabi ahaanba hakinayaan shaacinta khasaaraha, balse, ay macluumaadka la wadaagi doonan dowlada.
"Fahfaahinta xogta weerarada circa ah iyada oo la sheegayo goobta iyo khasaaraha argagaxisada loo geystay waxay ka caawineysaa Soomaaliya gaarida istaraatiijiyada hadafka amni," ayuu John Manley, afhayeenka AFRICOM yiri
Khamiistii ayay ahayd markii Mareykanka uu shaaciyay in duqayn uu kooxda xiriirka la leh Al-Qaacida kula beegsaday meel ku dhow degmada Jilib ee gobolka Jubada Dhexe, balse, uusan bixin fahfaahinta dhimasho ama dhaawac.
Sarkaal sare oo ka tirsan waaxda difaaca ee Mareykanka ayaa u sheegay VOA-da in howlgalkaasi ay ku dileen mid kamid ah dagaalamayaasha Al-Shabaab, kaasoo ku sugnaa bar kontarool oo laga galo Jilib.
Afhayeenka ciidamada Soomaaliya, Cabdinuur Ibraahim ayaa tilmaamay in khasaaraha duqayntaasi ka dhalatay ay korodhay, isaga oo tibaaxay in lagu khaarijiyay 52 kamid ah xoogaga Shabaab.
Mareykanka ayaa kamid ah dalalka ka taageera Soomaaliya la dagaalanka waxa loogu yeero argagaxisada, kuwaasi oo ah halista ugu wayn ee dhinaca amaanka dalkaan dhaca Geeska Afrika.
Mareykanka oo xaqiijiyay inuu Duqeyn kaloo cirka ah ka fuliyay Koonfurta Soomaaliya...